Disco Disco - NYE Countdown for Djs, Vjs, Nightclubs 2019
Nkpuru ulo sitere na DJ video vidio, gosiputa blu bido na ihe ngbacha anya. Aha gị na-egosi nnukwu ma na-elekọta ya ka onye ọ bụla ghara ileghara ya anya.
Ihe a na-ahụ maka egwu egwu egwu kpọtụrụ anyị maka nkọwa.
Nbudata vidiyo nke DJ na-egosi aha DJ gị. Nnukwu dị ka vidiyo nke DJ, dị ka ntụgharị n'etiti egwu ma ọ bụ mechie usoro gị. Mee ka ha cheta onye na-aga n'ihu na-aga site n'inweta aha gị n'ihu ma jiri nkwonkwo obi anyị na-ewuli elu DJ!
Ntụle ụda (19)
Hotel / Ụlọ oriri na ọṅụṅụ (1)
Ngụkọta vidio (21)
Nkwa ọkwa VIP (2)